बैङ्कमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको विरोधमा निजीक्षेत्र | गृहपृष्ठ
Home समाचार बैङ्कमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको विरोधमा निजीक्षेत्र
बैङ्कमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको विरोधमा निजीक्षेत्र
कामदार भन्छन्, काम गर्ने कि बैङ्कमा लाइन बस्न जाने ?
भदौ ५, वीरगञ्ज । सरकारले कामदार र कर्मचारीको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी दिन निर्देशन दिएपछि मुलुककै मुख्य औद्योगिक तथा व्यावसायिक केन्द्र वीरगञ्जका रोजगारदाताले यसको विरोध गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन अव्यावहारिक भएको गुनासो उद्यमीहरूको छ ।
सरकारले औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक र वित्तीय सुविधा बैङ्क खातामार्फत भुक्तान गर्नुपर्ने प्रावधानले उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए । सरकारले निजी कम्पनी र प्रतिष्ठानका कामदारको सुविधाको भुक्तानी बैङ्कमार्पmत मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी, गैरसरकारी र निजीक्षेत्रका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि साउन १ गतेदेखि प्रक्रिया शुरू गरेर वित्तीय संस्थामार्फत भुक्तानी दिन भनिएको छ । सरकारी निकायका लागि आसोज मसान्तलाई समयसीमा तोकिएको छ ।
निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले पुस मसान्तभित्र नियम लागू गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले निजीक्षेत्रका कार्यरत कतिपय कामदार कर्मचारीलाई भुक्तानीमा कठिनाइ हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष अनिल अग्रवालको ठहर छ ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने प्रत्येक कामदारलाई बैङ्कमार्पmत भुक्तानी दिन र लिन झन्झटिलो हुने अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘यसको प्रतिकूल असर प्रतिष्ठानको उत्पादकत्वमा पर्न जान्छ ।’ यस्ता कामदारलाई बैङ्कमा खाता खोलाएर भुक्तानी दिन सहज नहुने उनको भनाइ छ ।
सरकारको यो नियमसँगै केही वाणिज्य बैङ्कहरूले मजदूर कर्मचारीको खाता खोल्न विभिन्न प्रकारका ‘स्किम’समेत ल्याइसकेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा भारतीय कामदारसमेत काम गर्छन् । भारतीय कामदारमध्ये अधिकांशको बैङ्कमा खाता नहुने भएकाले भुक्तानीमा समस्या हुने अध्यक्ष शर्माको दाबी छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारको पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम दाखिला हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । अब औद्योगिक प्रतिष्ठानले सबैखालका मजदूर कर्मचारीको पारिश्रमिकमा काटिएको रकम नियम पु¥याएर कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
आकस्मिक र आंशिक काममा लगाइएका कामदारको भुक्तानी भने नगद वा चेकबाट गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । तर, यो व्यवस्था अमूर्त भएको उद्योगी राजेश क्यालको भनाइ छ ।
आंशिक र आकस्मिक रोजगारी निकै कम हुने भन्दै उद्योगी क्यालले बढी श्रमिक चाहिने उद्योग प्रतिष्ठानलाई यो नियमले बढी समस्यामा पार्ने बताए ।
‘कामदारलाई काम गर्ने कि रकम लिन बैङ्कमा लाइन बस्न जाने भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले उत्पादन प्रभावित हुन्छ ।’ यस्ता उद्योगमा बढी कामदार दैनिक ज्यालादारीमा लगाइन्छ ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारलाई चेकमार्पmत दिइने भुक्तानी अत्यन्तै अव्यावहारिक हुने कामदारहरू नै बताउँछन् । वीरगञ्ज कोरिडोरका उद्योगहरूमा ज्यालादारीमा कार्यरत पर्सा विन्ध्यवासिनीका हरिनारायण कुर्मी यो नियमले आपूmहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गुनासो बताए । चेकको भुक्तानी लिन १ दिन रोजगारी माया मार्नुपर्छ । काममा जाने कि भुक्तानी लिन बैङ्कमा ?,’ उनले भने ।
मजदूर नेता मीनप्रसाद आपागाईं यस नियममा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको दाबी गर्छन् । सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउन गरेको यो प्रयासलाई सकारात्मक मान्न सकिने भए पनि उत्पादकत्वमा भने प्रभाव गर्ने उनले बताए । माहिनावारी तलब लिने कार्मचारीलाई समस्या नभए पनि दैनिक ज्यालामा काम गर्नेलाई भने समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
सधै ठगी खान पल्केका मालिक किन मान्थे त? बर्षौ देखी काम गरेका पनी दैनिक ज्यालामा काम गराउछन् । यहा सम्म कि एक दिन बिरामी पर्दा नी बेतलबि बिदा पाउछन् । सरकारी बिदा चाड पर्व नि रित्तै हात । मजदुर सिथीले यो कुरा बुझ्नु पर्छ ।
LeaveaReply to सुझावकर्ता Cancel Reply